Home Wararka Qarax miino ah oo ka dhacay duleedka degaanka Qeycad ee Gobolka Mudug
Qarax miino ah oo ka dhacay duleedka degaanka Qeycad ee Gobolka Mudug
Wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in qarax miino uu haleelay gaari ay la socdeen dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab oo marayay deegaan ka mid ah gobolka Mudug.
Gaariga miinadu la qaraxday ayaa marayey duleedka deegaanka Qeycad, waxana gaariga uu ku sii jeeday deegaanka Bacaadweyn ee Koonfurta Gobolka Mudug.
Sida ay sheegayaan dadka ku nool deegaanka Qeycad illaa toban ka mid ah dagaalamayasha Alshabaab ayaa ku geeriyooday qaraxan.
Qaraxan oo ahaa mid culus ayaa loo malaynaya inuu ahaa mid ay Alshabaab ugu talogaleen in ay ku qarxiyan gaadiidka ciidamada dowlada.
Deegaanada ku yaal Koofurta Mudug ayaa waxaa hore dagaalo ugu dhex mareen ciidamada dowlada iyo kuwa Alshabaab.